Wenger: Si Gaar Ah Umaan Cannaanan Ozil
HomeWararka MaantaWenger: Si Gaar Ah Umaan Cannaanan Ozil
Arsene Wenger ayaa gees isaga leexiyey inuu wax cannaan ah oo gaar ah u jeediyey Mesut Ozil kadib markii xidiga kooxda Arsenal lagu ganaaxay in laga soo duubay muuqaal isagoo xaflad ka ciyaaraya saacado kooban kadib kulankii naadigiisu ka guuleystay Newcastle oo uu xannuun kaga baaqday.
Tababare Wenger wuxuu xaqiijiyey inuu la hadlay xidigii hore ee kooxda Real Madrid kuna qancay wixii uu ku sababeeyey xafladaas uu ka qayb gallay isagoo xanuun u jiifa.
Wojciech Szczesny iyo Jack Wilshere ayaa hore loogu ganaaxay labadoodaba kadib markii laga qaaday sawiro iyagoo sigaar qiijinaya , cannaan gaar ahna tababaraha kala kulmay, laakiin Wenger wuxuu dafiray inuu Ozil laftiisana sidoo kale si kulul ugu eedeeyey inuu dantiisa iska raacday.
Tababaraha reer France oo la weydiiyey wixii Ozil ay ku wada hadleen kadib markii uu arkay muuqaalada la soo duubay ee isagoo xaflada Huteelka caweyska ee Barlin ku yaala ka qayb qaadanaya habeenimadii, iyadoo lagu ogaa inuu xannuun uga maqnaaday ciyaarta ka dhacaysay geggida St James’ Park, wuxuu kaga jawaabay: “Uma socon inaan khafiifiyo anshax marinta. Waxaan ciqaabaa shaqsiyaadka nala shaqeeya ee aan ixtiraamin xeerarka iyo qaanuunka.
“Iyadoo ay taasi jirto, uma malaynayo inaad hor istaagi karto qof damacsan inuu saaxiibkii ku hambalyeeyo maalinta dhalashadiisa isagoo jooga wadankiisa hooyo.”
PSG Vs Toulouse 6-2 – All Goals & Highlights – 20 August 2017 HD
Modric Oo Sannadkii 5aad Oo Xidhiidh Ah Loo Doortay Xiddiga Ugu Fiican Croatia
Fabregas: Shan sanno ka hor Inaan Chelsea ku biirayaa wax xataa Laga Fikirayay ma Ahayn